Felọọ ndị egwuregwu Adidas Dragọn Z Z | Akụkọ akụrụngwa
Haziri ndị snịịka Adidas si na Dragon Ball Z
A maghị ụbọchị a họọrọ maka ngosipụta nke gọọmentị, ebe ọ bụ na e kwuru na ha ga-abata n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ obere ihe ma ọ bụ ihe doro anya. Nchịkọta ọhụrụ nke ndị sneakers si Adidas isiokwu nke Dragon Ball Z, ọ zọpụtara awa ole na ole gara aga na ntanetị.
Nke a Usoro anime ewu ewu dabere na manga Akira Toriyama, na-abịa mgbe mbụ Dragon Ball usoro, na ọ bụ nnọọ ewu ewu n'ụwa nile. Na nke a, anyị nwere ike ịsị na ndị nkuzi Adidas a nwere mmetụta nke ihe odide nke usoro ahụ, mana ha anaghị emegbu ya, ya mere ha ga-arịọ ihe karịrị otu n'ime ndị na-eso usoro ahụ na ndị na-abụghị ndị na-eso ụzọ saga a.
The mbụ nke ntapu e hụrụ na netwọk na-egosi na Adidas 'Yung-1', mmeghari ohuru nke ndi villain Freeza nyere, nke egosiputara na agba agwa nke agwa site na usoro:
The Dragọn Naa Z x Adidas Yung 1 "Frieza" dị leaked. Ọ bụ nke mbụ nke asatọ akpụkpọ ụkwụ si a ukwuu na-atụ anya mmekota setịpụrụ hapụ a Fall. Fọdụ ndị ọzọ kepu kepu na ụdị ndị: Ultra Boost "Yajirobe" NMD_CS1 "Mr.Popo" NMD_Racer "Mr.Satan" Futurecraft "Tenshinhan"? : @Seraphpy #adidas #yung #freeza #frieza #dragonball #dragonballz #dbz
A post na-akọrọ site Gịnị Na-akụda Ọzọ? (@iheanyichukwu) on Jan 7, 2018 na 8: 34am PST
Oge ọzọ anyị nwere ike ịchọta na netwọkụ mmekọrịta Instagram banyere akpụkpọ ụkwụ egwuregwu Adidas ndị a si n'aka cell Prophere ahụ. Na nke a, a na - eme atụmatụ ahụ site na agwa Cell ma ọ bụ Celula, dịka a maara ya n'akụkụ dị iche iche nke ụwa:
Dragọn Naa Z x Adidas Prophere "Cell" dị leaked. Ọ bụ nke abụọ n'ime asatọ akpụkpọ ụkwụ si a ukwuu na-atụ anya mmekota setịpụrụ hapụ a Fall. Fọdụ ndị ọzọ kepu kepu na ụdị ndị: Ultra Boost "Yajirobe" NMD_CS1 "Mr.Popo" NMD_Racer "Mr.Satan" Futurecraft "Tenshinhan"? : #Seraphpy #adidas #prophere #cell #dragonball #dragonballz #dbz
A post na-akọrọ site Gịnị Na-akụda Ọzọ? (@iheanyichukwu) on Jan 8, 2018 na 7: 27am PST
Ikekwe ụdị ndị agbapụtara agbapụta ga-esoro dị ka ọtụtụ ụdị metụtara ihe odide nke usoro ahụ, mana maka nke a, anyị ga-echere obere oge. Ọ ga-ekwe omume na nchapu a anaghị abịa naanị ya yana anyị nwere ike ịhụ egwuregwu ndị ọzọ na afọ fọdụrụnụ ruo oge mgbụsị akwụkwọ abịarute, nke ga-abụ oge nke mbupute ọrụ nke Adidas ndị a. Na-amasị ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Haziri ndị snịịka Adidas si na Dragon Ball Z
Qualcomm na-eweputa ihe nhazi ohuru maka ekweisi ikuku na-ebelata ihe eji ihe karịrị ọkara
Intel ga-amacha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nhazi ya ka ha kwụsị Specter na Meltdown